कुन विकास बैंक कस्तो, कसको किन्ने शेयर ? हेर्नुस्, वित्तीय विश्लेषण | karnalikhabar.com
कुन विकास बैंक कस्तो, कसको किन्ने शेयर ? हेर्नुस्, वित्तीय विश्लेषण – karnalikhabar.com
कुन विकास बैंक कस्तो, कसको किन्ने शेयर ? हेर्नुस्, वित्तीय विश्लेषण
प्रकाशित मिति :2017-02-15 20:28:30 शेयरमा लगानी गर्नुअघि कुनैपनि कम्पनीको वित्तिय अवस्था बारे पूर्ण जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि कम्पनि छनौटमा सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले १९ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक को वित्तीय अवस्था केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
यहाँ ति विकास बैंकहरुको विश्लेषण गरिएको छ, जसले हालसम्म चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । हाल राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक १९ वटा, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंक ७ वटा, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंक २३ वटा र १
जिल्ले विकास बैंक ८ वटा गरी जम्मा ५७ वटा रहेका छन् ।
खुद मुनाफा र चुक्ता पूँजीको आधारमा
मुनाफा वद्धिका आधारमा हेर्दा दोस्रो त्रैमासमा १९ राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक मध्ये ओम डेभलपमेन्ट बैंक (Om Development Bank) ले सर्वा्धिक मुनाफा वृद्धि गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफामा १९७ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड ३९ लाख मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म आईपुग्दा नाफा १९७ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गरी १९ करोड २ लाख भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ ।
त्यस्तै एस डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफा १५९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकले भने १५८ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरि तेस्रो स्थानमा छ । ८ वटा कम्पनीहरुले सतप्रतिशत भन्दा बढीले मुनाफा कमाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास मात्र हेर्दा भन्दा कैलाश विकास बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । जसले गत वर्षको तुलनामा ९३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।
हाल सम्म राष्टिय स्तरको विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी चुक्ता पूँजी कैलाश विकास बैंकको १ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा भिबोर विकास बैंक र तेस्रोमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ ।
खुद सम्पत्ति, खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफाका आधारमा
निस्कृय कर्जा र पूँजी पर्याप्तता कोषको आधारमा
प्रतिशेयर आम्दानी, मुल्य आम्दानीको अनुपात र प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा
निक्षेप, जगेडा कोष र कर्जा प्रवाहका आधारमा
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरणका आधारमा १९ विकास बैंक मध्ये सबैभन्दा बढी जगेडा कोष एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको रहेको छ । बैंकले ३ अर्ब भन्दा बढीको जगेडा राख्न सफल भएको छ । एनआईडीसीले १ अर्ब ४२ करोड निक्षेप संकलन गरी २ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
त्यस्तै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्नेमा कैलाश विकास बैंक अग्र स्थानमा रहेको छ । बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा सर्वा्धिक १५ अर्ब ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १४ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।